राजनीति ब्यक्तिगत लाभका लागि होईन
नवराज थिङ: नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालयको निर्णय र प्रधान मन्त्री अोलीले गरेको अवज्ञाले यतिखेर नेपाली राजनीतिको अाकासमा कालो बादल मडारिन थालेको अाभास भएको छ । पद्धतिगत हिसावले हेर्दा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको निर्णय लागू गर्नु पर्ने हुन्छ । अवज्ञा गर्न खोज्नु अर्घेल्याई नै होला । तर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीले गरेका निर्णयहरू कति जायज छ त ?
निर्णय गर्नेहरूले गम्भीरतापूर्वक सोच्नु पर्ने बिषय हो । बामदेव गौतमलाई पार्टीको निर्णयानुसार राष्ट्रिय सभामा सिफारिस नगर्नु प्रधानमन्त्रीको कदम पद्धतिगत हिसावले जति अलोकप्रिय छ देश र जनताको नजरमा सचिवालयको निर्णय पनि उत्तिकै अलोकप्रिय छ ।
निर्णय देश , जनता र पार्टीको हितमा हुनु पर्थ्यो , नेताहरू समस्या हैन समाधान हुनुपर्दथ्यो । राजनीति देश र जनताको हीतमा हुनु पर्दथ्यो, ब्यक्तिगत लाभका लागि होईन । यस दृष्टिले हेर्दा निर्णय सङ्गतिपूर्ण देखिदैन ।
राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि राजनीतिक रूपमा बामदेव गौतमसँग युवराज खतिवडा तुलना गर्न सकिन्न । गौतम राष्ट्रिय सभा वा प्रतिनिधि सभामा हुनु पर्ने व्यक्तित्व पनि हुन् तर राष्ट्रिय सभा सदस्यको लागि अपनाईएको प्रकृया र बाटो अप्राकृतिक देखिन्छ साथै उहाँको हठ अलोकप्रिय रहेको छ ।
राजनीतिक ब्यक्तित्वले राष्ट्रिय सभामा राजनीतिक बाटोबाट नै प्रवेश गर्नु पर्दथ्यो । त्यो बाटो भनेको निर्वाचन ( समानुपातिक समेत) को बाटो हो । निर्वाचनको लागि निर्णय गर्न खोज्दा उहाँले अाफ्नो लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खोल्नु पर्ने सर्त राख्नुभयो। ब्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति त्यो असम्भव थियो । पछि उहाँ निर्वाचन प्रकृयाबाट पछि हट्नु भयो । तर अाज प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा बिज्ञ व्यक्तित्वहरूबाट मनोनयन गर्नु पर्ने पदमा जान निसर्त किन तयार भए यो गम्भीर प्रश्न छ । उहाँको अाफ्नै इच्छाले वा उहाँको कमजोरीमा कोही खेल्दै छ ? देशलाई राजनीतिक निकास दिन वा सकसमा पार्न ?
बिगतमा पनि पार्टी फुटाएको अारोप उहाँलाई लगेको छ । अहिले पनि उहाँका निम्ति भएको निर्णयले पार्टी एकतामा गम्भीर समस्या पैदा भएको छ । पार्टीमा हुन सक्ने दुर्घटनाले देश र लोकतन्त्रमा नै अाघात पुग्न सक्छ । तसर्थ यो समस्याबाट पार्टीलाई बचाउन प्रधानमन्त्री र सचिवालयका पदाधिकारी तथा सदश्यहरू गम्भीर बन्न जरूरी छ । सबैले अा-अाफ्नो तर्फबाट जवाफदेहितापूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न अाबश्यक छ । स्वयम् गौतमले अाफ्नो राजनीतिक प्रतिष्ठालाई कायम राख्न यो दौडबाट हट्दै संकटको निकास दिन सके पार्टी र देशका निम्ति सबैभन्दा उत्तम हुनेछ ।
Times 1159635	Visited.